Website ဧ။် အကန့်အသတ်မရှိ လွတ်လပ်သော အသုံးချနိုင်စွမ်း
မိမိဧ။် Facebook wall ပေါ်တွင် ကြည့်နေစဉ် တက်လာသော boost လုပ်ထားသည့် ကြော်ငြာများရှိပါသည်။ ထိုကြော်ငြာပစ္စည်း နှင့် မိမိလိုအပ်သော / လေ့လာလိုသော ပစ္စည်းတို့ သည် ကွက်တိ တူညီနိုင်မှုရှိဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူပါ။ (ဥပမာ - မိမိက ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ယူလိုသော ဆန္ဒရှိသော်လည်း တက်လာသော ကြော်ငြာမှာ အမျိုးသမီး အကျီ င်္ဖြစ်နေမည် / ဒါမှမဟုတ် ကလေးကစားစရာ အရုပ်များ ဖြစ်နေမည်) ထိုသို့ ဖြစ်နေလျှင် ထိုကဲ့သို့ boost ထားသော ကြော်ငြာများသည် မိမိအတွက် အသုံးမဝင်ပါ။ ထို့ ပြင် Facebook ဧ။် post တစ်ခုတွင် ပုံ ၃၀ အထိသာအများဆုံး တင်လို့ ရတဲ့အတွက် အမျိုးပေါင်း ရာချီရှိနေသော ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုအား Facebook post တစ်ခုတည်းဖြင့် ကြော်ငြာရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။...
— June 2018 — 7365 views website
Speaker နှင့် Subwoofer တို့ ရဲ့ Ohms ဆိုတာဘာလဲ?
စပီကာ နှင့် Subwoofer တို့ မှာ သူ့ကို ဖြတ်စီးမယ့် လျှပ်စီးကြောင်း (Electrical Current) ကို ဆန့် ကျင်ပေးသည့် ကိန်းအညွှန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကို Ohms လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အသံချဲ့ စက်အပေါ်မှာ ဆွဲယူအသုံးပြုမည့် စပီကာဧ။် ဝန် ပမာဏ ကလို့ လဲ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ ပြင် အသံချဲ့ စက် Amp ကနေ လိုအပ်တဲ့ Current ကို ဆွဲယူရန်မှာ Ohms ပေါ်တွင် မူတည်ပါတယ်။ Ohms နည်းလေ watts ပိုပြီး စီးဆင်းနိုင်လေ (Watts များလေ) ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် စပီကာ တစ်လုံးတပ် အများစုသည် 8...
— February 2018 — 3692 views Ohms
စပီကာ နှင့် Subwoofer တိ်ု့ ရဲ့ Continuous , Program နှင့် Peak Watts ဆိုတာဘာလဲ?
** Speaker / Subwoofer တစ်လုံးမှာ ( 8 ohms /4ohms မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ) သူ့ ကိုအသုံးပြုနိုင်သော ဖော်ပြထားသည့် Power Ratings (watts) အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိပါသည်။ ထို အမျိုးအစားများသည် Continuous , Program နှင့် Peak တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒါတွေကဘာတွေလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါမယ်။ စပီကာထုတ်လုပ်သူ ကုမ္ပဏီများဟာ ထို Power Ratings ကို ခန့် မှန်းတွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခန့် မှန်းတွက်ချက်ရာမှာ စမ်းသပ်ခြင်း နှင့် ဈေးကွက်ရဲ့ အသိပညာများ ကို အခြေခံထားပါတယ်။ စပီကာ တစ်လုံးဧ။်...
— February 2018 — 2896 views Watts